नेपाल प्रहरीमा ४ भाइको एकता! – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल प्रहरीमा ४ भाइको एकता!
काठमाडौंः नेपाल प्रहरीमा बेला–बेलामा गजबको गठबन्धन देखिने गरेको छ । अहिले पनि प्रहरीको नेतृत्वमा एउटा फरक खालको गठबन्धन बनेको छ । आफूहरुको ब्याज नै बर्बाद हुने अवस्था आएपछि चार सिनियर डीआईजीबीच एकता भएको हो ।
प्रहरीको ९१ औं टोलीका डिआइजीहरु शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, नीरज शाही र प्रद्युम्न कार्कीले गठबन्धन बनाएका छन् । अस्वस्थ चलखेल नभएमा ठाकुर ज्ञवालीपछि उनीहरु चारमध्येबाट एक आईजीपी हुनेछन् । तर, जुनियर ब्याचबाट अस्वभाविकरुपमा उदाएका विश्वराज पोखरेल अहिले नै एआईजी भएर असारपछि आईजीपी हुने खेलमा लागेपछि उनलाई रोक्न चार डीआईजीले एकता गरेका हुन् ।
आफ्नो जो भए पनि हुने तर जुनियर ब्याचबाट ओभरटेक गराएमा त्यो संगठनका लागि गलत हुने भन्दै उनीहरुले गठबन्धन बनाएका हुन्। हालै अनौपचारिक बैठक बसेर उनीहरुले यस्तो रणनीति बताएका हुन् । यो समाचार आजको दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको छ ।
ट्याग्स: एकता, चार भाइ, नेपाल प्रहरी